आखिर किन भाईरल भैरहेको छ यी पुलिसवालीको तस्वीर ? यस्तो छ रहस्य ! -
जब सोशल मिडियामा कुनै पनि समाचार आउछ तब त्यो समाचार भाईरल हुन्छ। मान्छेहरु सत्य के हो भन्ने थाहा नभईकन एउटा कुरा पाएपछि त्यहि कुरामा सहिमा सहि थपेर बस्छन्। तर बास्तविकता बाहिरिएपछि उक्त भाईरल समाचार झुटो साबित हुन्छ। अहिले यस्तै एउटा समाचार आएको छ जुन समाचार पन्जावको एक SHO को हो जो धेरै सुन्दर छिन्। उनी पन्जावको बठिन्डा स्टेशनको SHO हुन् र उनको नाम हर्लिन मान हो। केहि दिनदेखि उनको फोटो भाईरल भईरहेको छ। मानिसहरूले पनि उनलाई पुलिस अफिसरका रूपमा बुझिरहेका छन्। तर यस फोटोको पछाडी लुकेको बास्तविकता अर्कै छ।
Previous स्वस्तिमा भन्छिन बिहेपछि निश्चल धेरै परिवर्तन भएको छ
Next २५ वर्षदेखि घाँस खाएर बाँचिरहेका छन् यी ५० वर्षीया मानिस, किन खान थाले घाँस रहस्य झन् दर्दनाक